Isibuko, uBugcisa kunye noBugcisa beFactory-SHUNDA - Ibhaskithi yesibambi sephepha elimnyama elineshelufu yeDesika yeKitchen Ngaphantsi kwekhabhinethi trivets yeMetal Rack Toilet Roll yeTissue Holder OEM kunye neFactory | SHUNDA
Ibhaskithi yesibambi seTawula yePhepha eliMnyama eneshelufu yeDesika yeKitchen Ngaphantsi kwekhabhathi iitrivethi zeMetal Rack yangasese yangasese Isibambi sePhepha leTissue
FOB ixabiso: USD $1 - 3 / Piece |Fumana Ixabiso lamva nje
Min.Ubungakanani boMyalelo: 1 Iqhekeza / Amaqhekeza
Ubunakho bokubonelela: 1000 Iqhekeza / Amaqhekeza ngenyanga
Izibuko: Ningbo, Shenzhen, Guangdong, Qingdao, njl
Immimiselo yokuhlawula: T/TL/CD/PD/A MoneyGram Credit Card PayPal Cash Escrow Okunye
Iinkcukacha zohambiso: Iintsuku ezisi-7
Inombolo yenqaku. SD-10255
Inkcazo Isibambi sephepha lesinyithi
Izinto eziphathekayo Isinyithi
Uhlobo lwezinto eziphathekayo Intsimbi
Umphezulu ugqityiwe Qire nge coating
Ucingo lweDiya ngokweemveliso okanye ngokwezifiso
Ubungakanani eyenzelwe wena
Umbala Mnyama, mhlophe, isilivere, njl
OEM & ODM Yamkelekile
I-SHUNDA Crafts yenziwa, ithumela ngaphandle, kwaye ibonelela ngazo zonke iintlobo zeMirror (Isipili seglasi, isibuko seNyanga, isibuko esineShelufu, isibuko seMetal Frame, njl. njl.), Imisebenzi yezandla yoMthi (iShelufu yoMthi, iShelufu yoDonga loMthi, iShelufu edadayo yoMthi, Ibhokisi yokuPakisha yoMthi, uMthi Ibhokisi, njl.njl IKrisimesi, iHalloween, iPasika kunye neValentine njalo njalo. Ngeminyaka emininzi yamava kunye neenzame, siye sakhula saba sisihombiso sobonelelo lwemizi-mveliso yasekhaya, kunye nokuthengisa ngokucwangcisiweyo kwekhonkco lemizi-mveliso, kubandakanya isipili, ishelufu, izibane kunye neemveliso ezinxulumeneyo. Kwaye sinenkqubo epheleleyo engqongqo yolawulo lomgangatho wokulawula inyathelo ngalinye ukusuka kwimathiriyeli, iisampulu, imveliso, ukupakisha ukuthunyelwa ukuqinisekisa yonke imveliso ngokugqibeleleyo.
Sigxininisa kumgaqo wabathengi kuqala, umgangatho kuqala, ixabiso eliphezulu kunye nenkonzo. Kwaye sinethemba lokuseka ubudlelwane beshishini bexesha elide kunye nawe.
Sineendlela eziqinileyo zokubonelela kunye nomgca wemveliso ogqibeleleyo, onokuhlangabezana neentlobo ezahlukeneyo zeemfuno zabathengi.
Sineqela eliphezulu labaqulunqi, ubuchule bokuphuhlisa imveliso ephezulu, iteknoloji yemveliso ephezulu, iqela lokuthengisa elichwephesha ukubonelela abathengi ngezisombululo zenkonzo enye.
Okwangoku, sinentsebenziswano enzulu kunye namawakawaka amashishini akumgangatho ophezulu ekhaya nakwamanye amazwe. I-80% yeemveliso zethu zithunyelwa ngaphandle. Wonke umntu weSHUNDA uhlala ekuthembisa ngewonga elincomekayo ngobungcali, ukunyaniseka, kunye nokusebenza kakuhle. Siyakholelwa ukuba siya kuba liqabane lakho elithembekileyo kwixesha elizayo.
Ukuthumela ngaphandle sikwanalo iqela lokurhweba lobuchwephesha kunye neqela le-R&D elihlala likwinkonzo yakho. Sinikezela ngenkonzo eqinisekisiweyo yokuthenga, ukusetyenzwa kunye nokulungiselela ukuthunyelwa kwempahla. Senza ukuthunyelwa ngexabiso eliphantsi, ixesha elifutshane kunye nokuthutha okukhuselekileyo. Ukwaneliseka kwakho kungamandla ethu amakhulu kunye nesivuno!
Ngaphambili: Iibhaskithi zeWholesale yeFruit Bowl yokuGcina Yima ingobozi yesinyithi yeziqhamo eneBanana Hanger
Okulandelayo: Ingobozi yoMgangatho oPhakamileyo eneMetal esongwayo yeSiqhamo seBhaskithi eSebenzayo
isibambi sephepha lesinyithi
Isigaba senyanga se-5pcs siseta udonga lomjikelo womthi wenyanga...
Udonga olunyuswe kwiShelufu yeNyanga nesipili Umqolo womthi...
I-Wholesale yokuyila ibhodi yebhodi yamaplanga ingaba hun...
ifenitshala yesimbo sefashoni Round Shape Metal Coffe...